यौन सम्पर्क Archives - Nepali Virals
शब्दमा आधारित भएर गरिएको संग्रह: यौन सम्पर्क
१५ माघ २०७४, सोमबार १०:१२	379
कुुनै पनि सम्बन्धमा गाढापन र आनन्द अनुभूति आवश्यक हुन्छ । पुरुषहरूले दिनमा कैयन पटक यौन सम्पर्कको आनन्द लिन चाहन्छन् भन्ने भनाइ एकातिर छ भने अर्कातिर महिलाहरू पनि पुरुषले नै जस्तै आनन्द प्राप्त गर्छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो रहस्य भने महिला वा पुरुष कसले रति क्रियामा सबैभन्दा बढी आनन्द उठाउँछन्? यो प्रश्नका उत्तर पढेर तपाईलाई पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ । महाभारतको अनुशासन पर्वमा मानव जीवनसँग जोडिएका कैयन पक्षहरूमाथि चर्चा गरिएको छ । धर्मराज युधिष्ठिरलाई एउटा प्रश्नले लामो समयदेखि हैरान तुल्याइरहेको छ । वाणहरुको शैय्यामा सुतेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका भीष्मसँग उनले यो प्रश्न सोधे । युधिष्ठिरले भीष्मसँग सोधेः सहवासका क्रममा स्त्री–पुरुषको मिलनको सुख कसले अनुभव बढी गर्छन्? यौन क्रियाका क्रममा सबैभन्दा बढी आनन्द कसले पाउँछ? भीष्मले भने– “यो प्रश्नको उत्तर दिन अत्यन्तै कठिन छ, जबसम्म स्त्री र पुरुष दुवैको अनुभव कसैले एकै साथ गरेको नहोस् ।” अनि भीष्मले भने– युधिष्ठिर तिम्रो प्रश्नको उत्तर भङ्गस्वाना र सकराको कथाका माध्यमबाट नै दिन सकिन्छ । आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनका लागि यो कथा सुन । धेरै वर्षअघि भङस्वाना नाम गरेको एक राजा थिए । उनी अत्यन्तै न्यायप्रेमी र यजश्वी थिए, तर उनका कुनै पुत्र थिएनन । पुत्रको चाहनामा ती राजाले ‘अग्निष्टुता’ नामक यज्ञ गरे । यज्ञको हवनमा केवल अग्नि देवताको मात्र आदर गरियो, त्यसैले देवराज ईन्द्र निकै क्रोधित भए । ईन्द्रले आफ्नो रिस प्रकट गर्नका लागि ती राजालाई दण्ड दिन चाहे । एक दिन ती राजा शिकारमा जाँदा ईन्द्रले उनलाई सम्मोहित गरिदिए । राजा भङ्गस्वाना वनमा यताउता अलमलिन थाले । सम्मोहित अवस्थामा उनले सबै होस गुमाए, उनलाई न त दिशाहरू’bout कुनै सम्झना थियो, न त आफ्ना सैनिकहरू नै देखिरहेका थिए । भोक प्यासले उनलाई आकुल–ब्याकुल बनाइ दिएको थियो । अचानक उनले एक सानो नदी देखे, जुन कुनै जादूजस्तो अत्यन्तै आकर्षक देखिइरहेको थियो । राजा त्यो नदीका तर्फ अघि बढे र उनले पहिले आफ्नो घोडालाई पानी पिलाए अनि आफैले पनि पिए । जसै राजा पानीमा प्रवेश गरे, पानी पिए, उनले के देखे भने उनका शरीर बदलिँदै गएको छ । उनी विस्तारै विस्तारै एक स्त्रीमा परिणत भए । लज्जाले गर्दा राजा आलाप बिलाप गर्न थाले । यस्तो किन र कसरी भयो भन्ने उनले बुझेकै थिएनन । राजा भङ्स्वाना कराउन लागे– “हे भगवान ! पुरुषबाट स्त्री बनेपछि राज्यका जनतासँग म …
१४ माघ २०७४, आईतवार ०५:४५	415
हरेक महिला जीवनमा आमा बनेको अनुभूति गर्न चाहन्छन् । आमा बनेको अनुभव विश्वकै सर्वोत्तम अनुभव मानिन्छ । बच्चा पाइसकेपछि अर्थात प्रसुति भइसकेपछि महिलाको शरीर पहिला जस्तो हुँदैन । गर्भावती अवस्थामा महिलाहरूको शरीरमा निकै परिवर्तन आउँछ । त्यसैले बच्चा पाएका लगत्तै यौन सम्पर्क राख्ने विषयमा सोचरहनु भएको छ भने कृपया सावधानी अपनाउनु होस् । बच्चा जन्माउने क्रम अर्थात प्रसब प्रक्रियामा महिलाहरू शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा थाकेका हुन्छन् । शरीर पनि अति नै संवेदनशील भएको हुन्छ, त्यसैले शारीरिक सम्बन्ध राख्ने विषयमा हतार गर्नुहुँदैन । प्रसवपछि करिब एक महिनासम्म महिलाहरूलाई रक्तस्राब हुन्छ भने ९ महिनासम्म एकतित्र भएर बसेको तरल पदार्थ गर्भाशयबाट बाहिरिइ रहेको हुन्छ । बच्चा दुई प्रकारले जन्मन्छन्, नर्मल र अप्रेशन (सिजेरियन)गरेर । बच्चा नर्मल नै जन्मेको रहेछ भने एक पटक डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् । किनकी यस्तो बेलामा महिलाको योनीद्वार फैलिएको हुन्छ र बच्चा पाइसकेपछि गर्भाशयमा चोट पुगेको हुन्छ । गर्भाशयमा बनेको घाउ पुरिन पनि समय लाग्छ । यदि प्रसवका क्रममा योनीद्वार चिरिएको (Episiotomy) छ भने त्यो सामान्य हुन कम्तिमा ६ हप्ता समय लाग्छ, तर चिरा पारिएको स्थानमा लगाइएको टाँका कारण केही केही महिलाले ६ हप्तापछि पनि यौन सम्पर्क राख्न असहज महसुस गर्छन् । यस्तो बेलामा यौन सम्पर्क राखेमा संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ । यदि सिजेरियन अप्रेसनबाट बच्चा भएको हो भने यौन सम्पर्क राख्न कम्तिमा पनि ६ हप्ता पर्खनु पर्छ भने डाक्टरको सल्लाह लिएरमात्र यौन सम्पर्क गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सिजेरियन गरेर बनेको टाँकाको घाउ नपुरिइन्जेलसम्म यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन । प्रसुति जुन ढंगले भए पनि रक्तस्राव नियमित नहुइन्जेलसम्म यौन सम्बन्ध बनाउनु हुँदैन । प्रसबपछि महिलाहरूका स्तनमा पनि समस्या सुरु भएको हुन्छ । पहिला सामान्य अवस्थामा रहेका स्तनका दुग्ध ग्रन्थिहरू सक्रिय हुन्छन् र त्यहाँ दूध उत्पादन सुरु हुन्छ । त्यसपछि महिलाहरूले स्तन टन्केको, दुःखेको महसुस गर्न थाल्छन् । नर्मल ढंगले प्रसुति भएको हो भने महिलाले कम्तिमा एक महिना र सिजेरियनमा कम्तिमा तीन महिनासम्म आफूलाई अस्वस्थ्य महसुस गरेका हुन्छन् । त्यसैले यस अवधिमा यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन ।